Yedu Laser Solutions - MimoWork
MASHOKO EKUITA APPLICATION
Zvipfeko & Zvekumba Textiles
Kushambadzira & Zvipo
Yedu Laser Solutions
CO2 Laser Machine yezvinhu zvisiri zvesimbi
Inoenderana zvinhu kubva laser cutter:
> Huni (MDF)
> Micheka Yakadhindwa (Micheka)
> Micheka isingachinjiki (Micheka)
CO2 Laser Machines kubva kuMimoWork vanga vachishandira pasi rese vatengi munzvimbo dzakasiyana siyana.Yakagadzika uye yakavimbika laser michina uye inoteerera gwara & sevhisi inounza yakakurumbira kugadzirwa kuvandudza nekushanda kwakanyanya uye kubuda.
MimoWork anotenda kuti:
Kugara-kuongorora hunyanzvi kunovimbisa yakanyanya yepamusoro laser tekinoroji kune vatengi!
•MimoWork Laser Options
Iyo yakakunakira iwe ndiyo yakanyanya kunaka
MimoWork laser inoisa zvigadzirwa zvedu zvelaser muzvikamu zvina zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi vedu zvekugadzira uye maitiro.
Akashongedzerwa neHD kamera uye CCD kamera, Contour Laser Cutter yakagadzirirwa kuona kuenderera kwakaringana kucheka kwezvinhu zvakadhindwa uye zvine maitiro.Yedu smart vision laser system inokubatsira kugadzirisa matambudziko econtour kuzivikanwaregradless yemavara akafanana emidziyo,pattern positioning, deformation yezvinhukubva pakupisa dhayi sublimation.
Tarisa mhando dzese
Inoenderana nemashandisirwo ako, iyo ine simba flatbed CNC laser plotter inovimbisa mhando kune inonyanya kudiwa maapplication.Iyo X & Y gantry dhizaini ndiyo yakanyanya kugadzikana uye yakasimba mechanicha chimiroiyo inovimbisa yakachena uye inogara ichicheka mhedzisiro.Imwe neimwe laser cutter inogona kuve inokwanisagadzira zvinhu zvakasiyana siyana.
Ultra-fastndiro rimwe izwi reGalvo Laser Marker.Kutungamira danda relaser kuburikidza nemotor-drive girazi, iyo Galvo laser muchina inoratidza yakanyanyisa kumhanya nehupamhi hwepamusoro uye kudzokorora.MimoWork Galvo Laser Marker inogona kusvika kune laser yekumaka uye yekutemera nzvimbo kubva pa200mm * 200mm kusvika 1600mm * 1600mm.
Iyo Digital Laser Die Yekucheka Machine inoshandiswa zvakanyanya kugadzirisamadhijitari mavara uye zvinhu zvinoratidzira zvezvipfeko zvinoshanda.Inogadzirisadambudziko remutengo wezvakajairwa kufa-kucheka maturusi mashandisirwo, zvichiunza kuchinjika kune akasiyana maodha huwandu.Yakanakisa kugadzirisa kuita paUV, lamination, kutsemura, inoita kuti muchina uyu uve mhinduro yakazara yedhijitari label process mushure mekudhinda.
Usanetseka kana uchiri kuvhiringika
Huya kwatiri kune Laser System Consulting
Isu tinobatsira maSME seako mazuva ese!
Ndezvipi zvinotariswa uye matipi anofanirwa kuwanikwa kana iwe uchitsvaga shanduko yenzira nyowani yekugadzira kana kuisa muchina welaser?
Pasina kupokana, pre-sales kubvunza kwakakosha kuti udzidze nezve zvimwe zvaunoda.
Iine makore makumi maviri akadzika hunyanzvi hwekuita basa mukugadzira uye kunzwisisa kwelaser tekinoroji uye maindasitiri ekushandisa, vanachipangamazano vedu vanopindura mibvunzo yako uye nekupa akakodzera kugadzirisa zano iwe nekambani yako.
MimoWork Laser Options
Iwe unogona kupfuura zvakajairwa
Yekuwedzera uye multifunctional laser sarudzo dziripo kune dzakasiyana siyana dzakagadziridzwa zvinodiwa.Yakagadzirirwa uye yakasarudzika laser sarudzo dzinoitika uye dzinogadzira mikana yakawanda yekugadzira inoshanda uye inochinjika nekuda kwekugara uchidzidza pamalaser masisitimu uye akashandiswa mabasa.Isu tiri kuunza yakasarudzika laser sarudzo kune ako akasiyana ekugadzira zvinodiwa.
Tarisa zvese zvingasarudzwa
Kumbira kuyedzwa kweLaser kweChinyorwa Chako Zvino!
Yako Yakavimbika Laser Supplier
©Copyright - 2010-2021 : Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa. , , , , , , ,